Lasa kasinga hanaovana dokam-barotra - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mitombo hatrany ny isan’ireo sekoly ambony na oniversite tsy miankina mahazo ny “habilitation”. Tsapa fa zary lasa kasinga ampiasain’ny sekoly ambony hanaovana dokam-barotra ny filazana fa nahazo ny habilitation izy.
Tsy vola baoritra
Vitsy ny ray aman-dreny na ny mpianatra koa aza no tena mahafantatra ny dikan’ny “habilitation”. Ny tazana fampiasan’ny mpitantana sekoly ambony dia ny filazana fa nankatoavin’ny Ministeran’ny Asam-panjakana (FOP, Fonction Publique) ny diplaoman’ny sekoly tantaniny. Antoka fa hahitana asa ilay diplaoma no ao ambadiky ny filazana fa nankatoavin’ny FOP ilay ‘baoritra’. Tsy vola baoritra.
Niovaova matetika ny lentan’ny fampianarana araka ny famaritan’ny ministera mpiahy ireo sekoly ambony sy oniversite tsy miankina. Teo ny “accréditation” izao ny “habilitation” indray no famaritana omena ny oniversite manaraka ny fenitra izay norafetin’ny Minisiteran’ny fampianarana ambony. “Anaram-boninahitry ny oniversite tsy miankina ny fanomezana ny ‘habilitation’”, hoy ny lahatsoratra iray niseho, pejy faha 6, tao amin’ny Lakroan’i Madagasikara (taratasy) mitondra ny datin’ny 4 novambra ary efa teny amin’ny tsena ny 31 okitobra teo.
Famaritana ara-panjakana ny “habilitation”. Ny fanjakana no mamaritra ireo fepetra napetraka sy tsy maintsy hananan’ny sekoly ambony na oniversite tsy miankina iray izay vao azo omena io fenitra io izy. Anatina didim-pitondrana no hamoahana ny lisitry ny mahazo ny “habilitation”. “Mahafaly ahy ny milaza aminareo mpianatra eto fa efa nivoaka ny didim-pitondrana manamarika ny fahazoan’ny ISPM ny habilitation” hoy ny sekretera jeneralin’ny Ministeran’ny fampianarana ambony sy ara-tsiansa ny sabotsy 27 okitobra teo teny Antsobolo. Nandritra ny lanonana famoahana andiana mpianatra nahazo ny mari-pahaizana licence no nanambarany izany vaovao izany. Tehaka no nasetrin’ny mpianatra izany. “Hafaliana ho anay ny nandre ny vaovao. Vokatry ny ezaka natao tao anatin’ny 20 taona izao” hoy ny rektoran’ny ISPM, Institut supérieur polytechnique de Madagascar.
Sekoly katô 3
“Nitombo 21 ny oniversite tsy miankina nahazo ny ‘habilitation’ ny taona 2013. Miisa 60 ny totaliny ankehitriny. Ahitana sekoly katolika lehibe 3 ny taona 2013. Araka ny didim-pitondrana lah. 9188/2013 tamin’ny 23 avrily 2013, dia nahazo izany ny UCM na Université Catholique de Madagascar. Ny ASJA na Athenee Saint Joseph Antsirabe, dia araka ny didim-pitondrana lah. 9188/2013 tamin’ny 23 avrily 2013. Ny ETS na Etablissement Technique Supérieur St Michel Amparibe, dia araka ny didim-pitondrana lah. 11.566/2013 tamin’ny 23 may 2013” hoy ny lahatsoratra hita tao amin’ny Lakroan’i Madagasikara efa voalaza teo aloha.
Tsapa araka ny tarehimarika fa maro ireo sekoly ambony sy oniversite tsy miankina no mbola tsy nahazo io “habilitation” io. Satria mbola vitsy ireo efa nahazo dia lasa fitaovana hanaovana dokam-barotra ilay izy. Tahaka ny LMD indrindra fa teren’ny any ivelany hanaraka izany LMD izany isika.
Isan’ny nahazo ny mari-penitra “habilitation” ny sekoly ambony katolika miisa telo. “Na tsy nahazo an’izany aza ny sekoly katolika dia avy hatrany dia hahatokisan’ny olona” hoy ity ray aman-dreny iray. Isan’ireo ray aman-dreny tazana nampiditra mpianatra amina sekoly ambony miankina amin’ny finoana katolika izy. “Tsy ny fahaizana ihany no ilaina eo amin’ny fiainana fa eo koa ny fahendrena sy ny fifehezan-tena. Heveriko fa izany no tombony azo amin’ny oniversite katolika” hoy ity ray aman-dreny ity. Isan’ny fiangonana manana oniversite sy sekoly ambony maro tokoa raha ny Fiangonana katolika. Tsikaritra fa mbola betsaka ireo tanan-dehibe tsy ahitana sekoly ambony sy oniversite katolika. “Tsy mora ny manokatra ireny toeram-piofanana ireny” hoy ity pretra mitantana sekoly ambony iray. Tsetsatsetsa tsy aritra no ilazana fa mbola tsy misy ny rafitra misahana ny fampianarana ambony eo anivon’ny Fiangonana katolika tahaka ny DINEC izany. Ny DINEC, direction nationale de l’enseignement catholique, dia misahana ny fanabeazana fototra hatreo amin’ny bakalorea. Misy ezaka miandry koa ao izany.
Ny sekoly ambony sy oniversite tsy miankina no omena ny “habilitation”. Ny an’ny fanjakana kosa dia avy hatrany dia efa mahazo io habilitation io. Na dia hita aza fa misy ny lesoka maro eny amin’ireny oniversitem-panjakana ireny. Tsara ihany no hanaovana fisedrana ireo oniversitem-panjakana ireo. Mba tsy ho zatra toloram-potsiny izy ireo.